Inona no tokony ho fantatra momba ny fitafian'ny vehivavy mitondra vohoka?
Misy fiatraikany betsaka amin'ny fahasalaman'ny vehivavy mitondra vohoka ny fomba fitafy ka mila fitandremana. Ny fahaizana mitafy dia mety ahatonga fiterahana mitera-doza ho an'ny vehivavy bevohoka.
Manimba ny fitomboan'ny vohoka ary manelingelina ny fivoarany ny fanaovana fitafiana tery loatra.
Ankoatra ny fijalian'ny tsaika ao ambohoka amin'ny fahaterena dia mety hangeja ny reny ao anatin'ny harerahana sy ny aretin'andoha lava ihany koa ny fanaovana fitafiana tery.
Ary aza hadinoina fa mety hiteraka olana na fahasarotana amin'ny fahasalaman'ny zaza ihany koa izany.
Fitafian'ny tokony hanaovan'ny reny mitondra vohoka, azonao faritana betsaka kokoa ve ny fitafiana tsy mahasoa ny vehivavy bevohoka izay?
Fadio ny manao zipo lava loatra kanefa ravin-damba mavesatra. Hisintona ny valahana midina io zipo manonja isaky ny mamindra io ka atahorana hisy fiatraikany amin'ny vohoka na sanatria mihintsy ampiato azy. Sanatria tsy ho tonga amin'ny fahasivy volana ny kibo fa misy voina mety hiseho tsy hampoizina.
Inona izany no torohevitra tokony ho an'ny vehivavy mitondra vohoka amin'ity fitafiana ity?
Aoka ho ravin-damba maivana ary ho lamba tohitena ka miaraka milanja ny lamba ny soroka. Lamba malalaka nefa tsy manelingelina ny tongotra mamindra, tsy atao mamafa tohatra fa eo anelan'elan'ny laferana sy ny kibon-dranjo ny halavany. Tokony tati-nono malalaka no hanaovana mba afahany mitombo tsara. Ary tsara ihany koa raha karazan-damba "cotton" no hanaovana fa tsy "nylon".
Ny kiraro tokony ho an'ny reny mitondra vohoka kosa manao ahoana?
Ny kiraro mangatsiaka dia tsy mety ho an'ny vehivavy bevohoka toy ny kiraro "kiranil". Raha sanatria ka tsy maintsy dia aleo manao ba kiraro "cotton" mafana tsara ampiarahana aminy. Ny kiraro avo koa dia tokony ho fadiana. Izay kiraro hita fa mampahazo aina ny vehivavy mitondra vohoka ihany no tokony hanaovany.
Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho aminao ary Ilay Andriamanitry ny fiadanana anie homba anao sy ny ankohonana mandrakariva.
Nivo RANDRIARIMANANA(Mpiasan'ny fahasalamana).
Crée le jeudi 02 août 2018 à 14:24:17
Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian\_'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina s[. . .]
Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\_'ny olan\_'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]